सामाजिक कार्यमा आरती सहकारी - Sainokhabar
होमपेज / संघ संस्था / सामाजिक कार्यमा आरती सहकारी
सामाजिक कार्यमा आरती सहकारी
मङ्गलबार, असार १७, २०७६ , साइनो खबर
पथरी । मोरङको पथरीशनिश्चरेमा रहेको आरति बहुउद्देश्य सहकारी सस्था लिमिटेडले गरिव तथा अतिबिपन्न बर्गका बिध्यार्थीहरुलाई स्कुल ब्याग बितरण गरेको छ । सस्था १८ औं बर्षमा प्रबेस गरेको उपलक्षमा संस्थाले बिभिन्न कार्यक्रम गर्ने भएको छ ।
कार्यक्रम अन्तरगत १६ गते सोमबार पथरीशनिश्चरे ८ मा रहेको बुद्ध मा. विका १ सय २० जना बालबालीकालाई ब्याग बितरण गरेको हो ।
सस्थाले २० गते राहत बितरण गर्ने छ भने २१ गते शनिवार बाल कार्यक्रम गर्ने भएको छ । २२ गते आईतबार वृद्ध भत्ता, एकल महिला तथा जेष्ट नागरीक सम्मान, १२ मा उत्कृष्ट अंक ल्याउने २ जना सेयर सदस्यका छोरा छोरीलाई छात्रवृत्ती र रक्तदान गरी समापन गर्ने छ । संस्थाले यस अघि स्थापना दिवसको अवसर पारी पथरीशनिश्चरेमा रहेका सामुदायीक स्कुल पञ्चायल मा. विमा अपाङगता भएका विध्यार्थीरुलाई शैक्षिक सामाग्री बितरण गर्दै आएको थियो ।
कार्यक्रममा ब्याग बितरण गर्दै कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथी वडा नं. ८ का वडाध्यक्ष बाबुराम दाहालले साकुदायीक स्कुलमा अंग्रेजी शिक्षा लागु गर्दै गरिव जनताका छोरा छोरीलाई पनि अंग्रेजी शिक्षाको पहुचमा पुर्याउन कठिबद्ध रहेको बताए ।
बिध्यालयले २ कक्षा सम्म गरिवका बाल बच्चा अंग्रेजी माध्यमबाट पठन पाठन गराउदै आएको छ । सामुदायीक बिध्यालय भए पनि समय अनुसारको शिकाई गर्नु पर्ने बाध्यता भएको र वडा नं. ८ ले बार्षिक रुपमा ३ लाख उपलब्ध गराउने भए पछि अंग्रेजी पद्धतीबाट पढन पाढन सुरु गरेको प्राचार्य बोधराज सिक्देलले बताए ।
सहकारीको निती र नियममा रहेर समाजका हरेक पक्षमा सहयोग गर्दै आएको सहकारीले आफ्नो क्षेत्र अधिकार भित्र हरेक सबै सेयर सदस्यको मन मनमा रहर्ने संसथाका अध्यक्ष यादव चन्द्र दुलालले बताए ।
कार्यक्रममा बिध्यालय ब्यावस्थापन समितीका अध्यक्ष श्याम बहादुर गजमेर सस्थाले सामुदायीक स्कुलको सहयोग गरेमा खुसी ब्याक्त गर्दै आउदा दिनमा पनि यस्तै सहयोग भए गरिवका छोरा छोरीमा पनि शिक्षाको उज्यालो छर्न सकिने बताए ।
सस्थाले प्रत्येक बर्ष संस्थाको बिभिन्न अवसरमा समाजिक कार्य गर्दै आएको र भावि दिनमा पनि गर्दै जाने कार्यक्रमको संयोजक राजेन्द्र भण्डारीले बताउनु भयो ।